Best ememme Na Europe na ebe Ịchọta Ya | Save A Train
Home > Travel Europe > Best ememme Na Europe na ebe Ịchọta Ya
Oge na-ndị ọzọ okpu na na stomping akpụkpọ ụkwụ juru n'ọnụ! Anyị na-na na na-ele anya maka Best ememme na Europe na ebe-ahụ na ha. Ị dị njikere hey gị site Summer? 🙋🏻
Best ememme na Europe: Creamfields, Daresbury, United Kingdom
Creamfields bụ otu n'ime Best ememme na Europe na UK nnukwu egwu music ememme. Ime ka ọtụtụ n'ime gị akụ ezumike na August na akwụkwọ a tiketi na mega party!
Ha nkebi raara ruo n'ụlọ, EDM, Tekno, drum na bass, ọhụụ, elu unyi na ndị ọzọ, eme Creamfields na-aga na-eme ememme maka egwu music Fans Britain.
Nke a afọ 2019 na ememme na-abịa na ikuku nke exclusivity. Ha ga-abụ nanị ndị ka a nọrọ iconic egwu supergroup Swedish House Mafia na UK. Ha ga-ga-mba Deadmau5 na mbụ arụmọrụ nke Cirez D & Adam Beyer.
Jikọọ na 70,000 ndị mmadụ na-abịa azụ ọ bụla Summer na-enwe immersive ọhụrụ nkebi, The Epic mmepụta etoju, ìhè na-egosi na pyrotechnics.
Best ememme na Europe: Primavera Sound 2019. Barcelona, Spain
Anyị na-ahụ n'anya ememe a n'ihi na ụdị ihe mere. E wezụga ha ultra cryptic ozi na ha na-elekọta mmadụ media nyiwe n'elu ikpeazụ ụbọchị ole na ole, asịrị e circling banyere ihe 'The New Nkịtị’ nwere ike ịpụta. Lelee Primavera facebook page ịhụ ihe anyị pụtara.
Ihe anyị na-n'anya n'ezie ezie, bụ na ememme gosiri doro anya nzube napụta na ụlọ ọrụ dum nkwa iji nweta hà okike onodi on lineups. Ha na-àjà elu a posta na-pleasingly un-adịkwaghị ikom. Ma eleghị anya, ndị ọzọ ihe, ọ bụ onye na-deservedly bi site a iche iche mix nke omume na-gosipụtara na ha kwesịrị nke Nsonye n'elu-adịbeghị anya n'oge, n'agbanyeghị nke okike, genre, ma ọ bụ ọgbọ.
N'ụzọ bụ ịhapụ omenala otu ma ọ bụ abụọ headliners a ụbọchị usoro, ndị na-ahazi nwere juru n'ọnụ n'elu nke ụgwọ maka ụbọchị nke ọ bụla na a akụ na ụba nke talent, tinyere amasị nke Erykah Badu, izu impala, Solange, Future, Cardi B, Interpol, Janelle Monáe, Robyn, na, Christine na Queens, James Blake na Mac DeMarco.
Lelee video ọ bụrụ na ị mkpa ọ bụla ọzọ doro!
Sziget bụ Best ememme na Europe na ihe Island na jupụtara music, omenala, n'anya, na nnwere onwe! ọrụ! Ebee ka anyị na-edebanye? Chere, ka-esi na ị na ụfọdụ nkọwa ụzọ.
The mbụ Sziget Festival hazie azụ na 1993 dị ka a obere nnọkọ oriri na ebe ọ bụ na ghọrọ usoro otu n'ime Europe kasị ukwuu music ememme. Kwa afọ na ha na-agbalịsi ike mee ka Szitizens ụfọdụ nke nnukwu aha si n'ebe, na-nọrọ n'ụlọ n'elu 1,000 egosi gafee 60 nkebi, maka 7 ụbọchị ogologo. Rehydrate onye ọ bụla? 😝
Gịnị na-amasị anyị banyere ememe a na ihe na-esetịpụrụ ha iche maka anyị?
The weight they put on art as well as music. There are multiple venues including a circus, nkiri, ngosi nka nkeji iri na ise na ọtụtụ ndị ọzọ. Artists na performers si n'ụwa nile na-egosipụta nkà ha. E nwekwara ohere maka Szitizens na nka-arụ ọrụ ọnụ iji ike-agaghị echefu echefu na ihe bara uru sere.
Ọ bụrụ na nke ahụ adịghị mma ezuru, na ha bụkwa eco-enyi na enyi! Ha na-agbalị igosi na ozi mgbe ọ bụla ha nwere ike na-arịọ ememme goers dị ka eco-adịghị.
Mmetụta sitere n'ike mmụọ nsọ na-eso music site Europe na-ahụ Best ememme na Europe? Mgbe akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi na-enyemaka nke Save A Train !
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-festivals-europe/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Creamfields #Europemusicfestival #MusicFestival #Primavera #agwaetiti europetravel ememme longtrainjourneys Party trainjourney